Sida loo ka hayaan Celinta Android phone effortlessly
Google si weyn syncs qalabka Android. In munaasabadda, marka aad qasdin wax tirtiray ka qalab Android aad, u hagaagsan Google idinka Koriya ka dhib badan. Xaaladdan oo kale oo musiibo ah marka xogta oo dhan helay tirtiro ka qalab, nasiib wanaag, Google hayaa hayaan qaar ka mid ah meel. Hayaan waxay bixiyaan dareen weyn oo ammaanka wax kiiska uusan khalad la xogta qalab aad.
Aan fahmaan sida aad u soo celin kartaa telefoonka Android ka hayaan effortlessly isticmaalaya gurmad Google iyo codsi kama dambaysta ah laga helo suuqa loo yaqaan Wondershare MobileTrans .
Xogta kaabta qalabka la isticmaalayo Service ee kaabta Android:
Waxaad dib kartaa sawiro, videos, music iyo files ku saabsan qalabka la isticmaalayo xisaabtaada Google. Adeegga kaabta Android loo isticmaali karaa in xogta gurmad xiran mid ka mid ah ama in ka badan xisaab Google. Haddii aad rabto in aad bedeli qalab aad ama masixi xogta ay hadda jira, waxaad soo celin karaa xogta adiga oo isticmaalaya xisaab kasta oo meesha aad taageeray xogta aad.
Talaabooyinka in ay dib u kor xogta adiga oo isticmaalaya adeegga ee kaabta Android:
1. Marka hore, la furo qalab ee Settings menu.
2. Hadda, Under "Personal," garaac kaabta & dib.
3. Dooro sanduuqa ku xiga "data kaabta aan."
Haddii aad leedahay wax ka badan hal Google Account on qalab aad: Tubada account kaabta dooro akoonka aad rabto inaad dhigay sida aad gurmad xisaabta iyo haddii aadan hore u leedahay xisaabta ah gurmad on qalab aad, ka jaftaa account kaabta ku darto akoon cusub .
Si toos ah loo soo celiyo app goobaha
Marka aad dib codsi ah oo ku saabsan qalab aad, waxaad dooran kartaa doorasho ay u soo celiyaan app goobaha. Habkaani waxa uu a-xaalad pre in aad hore u xoojiyaa xogta aad la xisaabtaada Google, iyo arjiga aad doonaysid in aad sidoo kale dib-u-soo dajiyo ayaa isticmaala adeegga gurmad ah. Chine Qaar ka mid ah ma laga yaabaa gurmad iyo dib usoo celiso dhamaan xogta.
Talaabooyinka si loo soo celiyo app goobaha on qalab aad
1. Fur qalabka ee Settings menu.
2. Under "Personal," kaabta tuubada & celin.
3. Hubi sanduuqa ku xiga "Automatic soo celiyo."
Soo celinta xogta iyo goobaha la isticmaalayo Service ee kaabta Android:
Waxaa loo isticmaali karaa Service ee kaabta Android si loo soo celiyo xogta aad ku qalab cusub iyo soo celinta app goobaha marka aad xogta aad xoojiyaa in aad xisaabta Google. Marka aad xisaabtaada Google in qalab cusub ku darto, xogta in aad hore u xoojiyaa on account Google ee uu soo celiyay in qalab cusub.
Waa maxay xogta iyo goobaha la soo celiyay.
Goobaha Google Calendar
Wi-Fi shabakadaha & sirta ah
Wallpapers screen Home
Apps rakibay dhex Google Play
Language & Input goobaha
Dhinac saddexaad app goobaha & xogta
Kaabta iyo Soo Celinta Iyadoo Wondershare MobileTrans
Wondershare MobileTrans waa mid xal stop aad kala iibsiga mobile iyo shuruudaha gurmad. Waxaa wareejin karaan xiriirada, abuse wac, files warbaahinta, iyo in ka badan oo idil badan nidaamyada hawlgalka mobile. Ma kala iibsiga kaliya laakiin waxa ay sidoo kale dib kartaa xogta casriga ah si aad u your computer. Waa la heli karo, telifishin functional iyo taageerada dhammaan nidaamyada hawlgalka mobile oo waaweyn marka laga reebo Windows Mobile. Sidaas, wareejinta xogta iyo baahida gurmad ay sahlan tahay in la oofin la software this.
Bedelka Guda wac, fariimaha qoraalka ah, barnaamijyadooda, music, sawiro iyo videos, ma ahan oo keliya xiriir ah.
Wondershare MobileTrans waa codsi Risk-free xajiya oo tayo leh asalka xogta dhawrsan ah.
Kala iibsiga Xogta click hal.
Transfer xogta aan cabsi ka qabin in xogta la badiyay.
Gebi ahaanba bilaash ah halis wax.
Waxaad ku wareejin karaa qodob aad u dhexeeya telefoonada taageeray oo dhan ku network kasta oo aan ka kaaftoomi.
Wondershare MobileTrans waa saaxiibkaa kama dambaysta ah marka ay timaaddo inuu u dhaqaaqo xogta ka mid phone in telefoon kale ee network la mid ah. Waxaad sidoo kale u haajiraan karaa shabakadaha kala duwan oo sii xogta ku saabsan telefoonka. Waxaad sidoo kale beddelan karo xogta laga telefoonada heshiis in telefoonada aan heshiis si fudud.
Android: ka Android 2.1 si ay Android 5.0
macruufka: macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 7.1, macruufka 8 & macruufka 8.1
Blackberry: OS 10.3.1 / 10.3.0 / 10.2.1 / 10.2.0 / 7,1 / 7,0 (Taageer faylasha raad raac ah oo telefoonada BlackBerry socda OS 10.3.1 / 10.3.0 / 10.2.1 / 10.2.0 / 7,1 / 7.0, kuwaas oo abuuray by BlackBerry® Link)
Xiriirada, Messages, Calendar, Photos, Music, Video, wac abuse, Apps
Talaabooyinka in gurmad Android Devices
Talaabada 1: Isku Qalabka aad u Computer, oo ay maamulaan Wondershare MobileTrans , oo guji Start inuu soo galo taleefanka si uu suuqa kala iibsiga telefoonka. Connect aad laba qalabka (Android, Symbian ama macruufka qalabka) si aad u computer la fiilooyinka USB. Marka aad qalabka ku xiran yihiin oo ogaan MobileTrans. Riix Back Up Your Phone .
Talaabada 2: Dooro noocyada file aad u baahan tahay in gurmad ah, oo guji Start Copy . Barnaamijku wuxuu ku caawin doonaa gurmad dhammaan macluumaadka aad dooratay in computer.
Talaabooyinka soo celinta Data in phone kale
Talaabada 1: Riix Soo Celinta ka hayaan on interface ugu weyn barnaamijka. Mobiletrans taageeri karaan hayaan ee ay tababarayaasha kale ee mobile aad, sida MobileGo, Samsung Kies, iCloud iyo Lugood, iwm Dooro file gurmad aad jeclaan lahayd in la soo celiyo ka mid ah liiska ku.
Step2: Hadda, xogta laga faylka gurmad in loo gudbin karaa tixi doona on furmo suuqa sida xiriirada, fariimaha, sawiro, iwm Waxaad dooran kartaa macluumaadka aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan riix Start Copy. Xogta loo doortay in si buuxda loo soo guuriyeen doonaa in aad telefoon u socoto.
> Resource > Android Data Recovery > Sidee soo celinta Android Phone ka hayaan Effortlessly